ရေစိုခံ အလူမီနီယံ ဆီလီကွန် ပြတင်းပေါက် ပလပ်စတစ် ရာသီဥတု တံဆိပ်တုံး
ရေစိုခံ အလူမီနီယံ ဆီလီကွန်ကော် ပြတင်းပေါက် ပလပ်စတစ် ရေချိုးခန်းတံခါး မိုးလေဝသ တံဆိပ်တုံး
1. အလူမီနီယံ ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးများအတွက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း။
2. ယက်လုပ်ထားသော polypropylene ချည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။
3. အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၊ အမြင့်များ၊ ကျောထောက်နောက်ခံအနံနှင့်အထူများရရှိနိုင်သည်။
1. ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားဒဏ်ခံခြင်း၊ အသံဒဏ်ခံခြင်း၊
2. ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသည်၊ 20,000 တိုက်မှုပြီးနောက်အဆက်မပြတ်ထားပါ။
3. ကောင်းမွန်သောတံဆိပ္ပါရှိပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
A: ယေဘုယျအားဖြင့် 5-10 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ စတော့တွင် ရှိနေပါသည်။သို့မဟုတ် 15-20 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါက အရေအတွက်အလိုက် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်း 20 ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကြီးမားသောညစာစားပွဲကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း သေးငယ်သောအမှာစာများကို ငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ၊ MOQ သည် 5000 မီတာရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်- Windows & Doors အတွက် Pile Weatherstrip
ကျွန်ုပ်တို့သည် တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပေးပို့နိုင်သော စက်ရုံလေးခုရှိသည်။
တံခါးများအတွက် မိုးလေဝသဒဏ်ကို ခံစားရသည်။
pile weather strips တွေ
JYD A68 စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော ကြေးမုံ S...
JYD A66 Neutral ဆီလီကွန် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော တံဆိပ်တုံး
ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးများကို PVC ရော်ဘာကြိုးပြားများ
အရည်အသွေးမြင့် သိုးမွှေးပုံ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော သိုးမွှေးစတို...